5 Best Day Njem Site Vienna Iji Chọpụta Austria | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Day Njem Site Vienna Iji Chọpụta Austria
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 12/03/2021)
Vienna bụ a na-ewu ewu njem ebe, tumadi n’ihi na ọ mara mma ma ọ bụrụ n’obodo nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye
Otú ọ dị, ọ bụkwa a obodo gburugburu site na ọtụtụ ndị ọzọ na-akpali ebe. Ọ bụrụ na ị nwere oge a ụbọchị njem site Vienna, ebe kwesịrị ị na-atụgharị uche gị? Anyị enwetala aro anyị ga-enwerịrị mee ezumike gị na Austria ọzọ vasatail. Ọzọkwa, ị pụrụ ịhụ n'ebe ụfọdụ na i nwere ike agaraghị eme oge gara. Nwere a lee anya na anyị ndepụta 5 Best Day Njem Site Vienna Iji Chọpụta Austria na i nwere ike na-amasị!
Hallstatt bụ zuru okè n'ihi na a ụbọchị njem site Vienna n'ihi na ọ dịghị ewe ogologo inyocha, na ọ bụ nnọọ pụtara. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na- na-ewere a ụgbọ okporo ígwè ka Hallstatt, na-aga na n'isi-ututu, ya mere na ị ga-enwe oge zuru ezu. Ọ bụ otu n'ime ndị fọdụrụ n'ezinụlọ ụbọchị njem site Vienna, na ime atụmatụ dị mma dị mkpa. ma, Ozugbo ị na-e, e nwere ọtụtụ na-enwe. hikes, na-ewere foto, ma ọ bụ na ịga na ice abaitiat oyi niile magburu onwe nhọrọ.
Munich na Hallstatt Ụgbọ oloko
Innsbruck na Hallstatt Ụgbọ oloko
Passau ka Hallstatt Ụgbọ oloko
Rosenheim na Hallstatt Ụgbọ oloko
Salzburg bụ mfe iji ụgbọ okporo ígwè site Vienna, na na ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị-ekere òkè ụbọchị njem. Dị ka ọmụmaatụ, na Salzburg, ị nwere ike inyocha akụkọ ihe mere eme n'etiti obodo na ya ọmarịcha Baroque ụlọ. Mgbe ahụ e nwere Hobensalzburg Ebe e wusiri ike, nke ga-enye gị ihe kasị mma echiche nke obodo.
Ọzọkwa, ị pụrụ ịgagharị Mozart obibi, ugbu a ngosi nka na ọtụtụ ihe na-amụta banyere ama dere. ọbụna ihe, ị pụrụ ịga na Salzburg katidral ebe e mere ya baptizim.
Munich na Salzburg Ụgbọ oloko
Vienna na Salzburg Ụgbọ oloko
Graz na Salzburg Ụgbọ oloko
Linz na Salzburg Ụgbọ oloko
3. A Day Njem Iji Lainzer Wildlife Park
Ọ bụrụ na ị na-achọ na-esi pụọ obodo a ụbọchị njem, i nwere ọtụtụ nhọrọ. Otu n’ime ha bụ Lainzer Ogige Anụ ọhịa, nke i nwere ike ịhụ na Vienna Woods. Its beautiful nature with ancient oak and birch trees will make you feel like you have stepped into a fairytale.
N'oge gara aga, ebe a bụ a mmasị ịchụ nta obibi nke ọtụtụ ndị a ma ama. taa, i nwere ike ichu nta, ma i nwere ike na-enwe mara mma hiking ụzọ ụkwụ nakwa dị ka echiche si Hubertuswarte Observatory.
Nuremberg na Vienna Ụgbọ oloko
Frankfurt na Vienna Ụgbọ oloko
Innsbruck na Vienna Ụgbọ oloko
Stuttgart na Vienna Ụgbọ oloko
dị nnọọ a 40 nkeji njem site Vienna, i nwere ike ịhụ nke a ọdọ mkpuru - Laxenburg Castle. The ebe bụ otu ugboro a ahịa obodo, ma ugbu a ọ na-eje ozi dị ka a ọmarịcha adianade Viennas amara. Dị ka ọmụmaatụ, ị pụrụ ịnụ ụtọ onye nke ya ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, sunlit ubi na ọbụna ụgbọ mmiri si n'elu ọdọ.
Na gburugburu Vienna, e nwere a ebube ochie nnukwu ụlọ ị nwere ike inyocha. Kreuzenstein na-echetara ọtụtụ njem nke kpokọtara Hogwarts, n'ihi na nke spiers na turrets. Ihe ọzọ bụ na, ọ na-enye enweghị atụ, breathtaking echiche nke Vienna Woods na Danube. Ọzọkwa, na Leobendorf obodo dị nso na, nke nwere ike ịbụ a mma nkwụsị n'ihi na ị na gị ụbọchị njem.
Graz na Innsbruck Ụgbọ oloko
Vienna na Cologne Ụgbọ oloko
Cologne na Vienna Ụgbọ oloko
Njikere-ahụ ihe niile Vienna nwere na-enye mgbe ọ na-abịa ụbọchị njem? Na ihe ọ bụla nke anyị 5 Best Day Njem Site Vienna Iji Chọpụta Austria, gị na njem ga-ekwesị ya. Kwadebe na-enwe gị ezumike ma jide n'aka na AKWỤKWỌ gị Train Tickets n'oge!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Best Day Njem Site Vienna Iji Chọpụta Austria” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-from-vienna%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / de na / fr ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
#traveleurope Daytrips eurotrip ụgbọ okporo ígwè njem travelaustria traveltips
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Holland, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe
Train Travel Britain, Train Travel Holland, Inzọ Njem Italytali, Ingbọ ologo Spain, Travel Europe
Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Inzọ Njem Italytali, Train Travel The Netherlands, Travel Europe